नेपाल आज | तरुण दलका विषयमा पार्टी बोल्नुपर्छ, चूप लागेर हुँदैन ( भिडियोसहित)
तरुण दलका विषयमा पार्टी बोल्नुपर्छ, चूप लागेर हुँदैन ( भिडियोसहित)
कहिँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भने जस्तै नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन तरुण दलमा ताण्डव मच्चिएको छ । अध्यक्षले महासचिव र महासचिवले अध्यक्षलाई संगठनबाटै निष्कासन गरेर सार्वजनिकरुपमै वक्तव्यवाजी गरी जात्रा देखाएका छन् ।
तरुण दलमा अध्यक्ष जीतजंग बस्नेत र महासचिव भूपेन्द्रजंग शाहीको लडाईंले अन्य पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई समेत हँसाएको छ । संगठनको विधि विधानको बेवास्ता गरी मनलागी निर्णय गर्ने र एक अर्कालाई संगठनबाट निकाल्ने कामले कांग्रेस नेतृत्वलाई समेत आक्रोशित बनाएको छ ।
तरुण दलका उपाध्यक्ष उत्तम चापागाईंका अनुसार दुई जना मध्ये महासचिव भुपेन्द्रजंग शाहीबाट बढी गल्ती भएको छ । शाहीले अध्यक्षलाई चुनौती दिंदै संगठनको विधान विपरित अनुशासनहीन काम गरेपछि उनलाई कारवाही गरिएको हो । पहिलो चरणमा उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएकोमा त्यसको जवाफ नदिई उल्टो अध्यक्षलाई नै स्पष्टीकरण सोधेपछि ‘अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षको सर्वसम्मत निर्णयबाट शाहीलाई पदबाट हटाइएको हो ।’
उपाध्यक्ष चापागाईं भन्छन्, ‘महासचिव शाही एकलढंगले चल्न खोजे । अध्यक्षात्मक प्रणालीमा अध्यक्षलाई मान्दिन भन्न पाइँदैन । उनले त उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षसंग पनि समन्वय गरेनन् । आफनै लहडले निर्णय गर्न थाले । हुँदाहुँदा संगठनले कारवाही गरेकाहरुको कारवाही फुकुवा गर्ने, जिल्लामा संगठन बनाएर पद बाँड्ने गर्न थालेपछि उनलाई कारवाही गर्नुपर्ने स्थिति आएको हो । ’
महासचिव शाही निकै क्षमतावान व्यक्ति हुन् । दूरदराजबाट आएर संघर्ष गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका हुन् । उनी अझै अघि बढ्छन भन्नेमा शंका छैन तर संगठनमा प्रणाली अनुसार चल्नुपर्छ, समन्वय गर्नुपर्छ भन्ने कुराको हेक्का उनले राखेको पाइएन ।
यो विषयमा अब पार्टीले चाँडै केही न केही निर्णय लिनेछ । पार्टी चुप लागेर बस्नु हुँदैन, केही न केही निर्णय लिनुपर्छ । अहिले तरुण दलमा महासचिवलाई कारवाही गरेपछि तीन जना मात्र छन् । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षले आपसी समन्व गरी अधिवेशन गरिनेछ । पार्टीको निर्देशन आउने वित्तिकै सोही ढंगले अघि बढ्न कुनै समस्या छैन ।
चापागाईं भन्छन्, ‘तरुण दलको नेतृत्वमा मेरो दावी छ । तरुण दललाई पार्टीको साख बचाउँदै आक्रामक ढंगले अघि बढाउन म सक्षम छु । मूख्यतः अहिलको अधिनायकवादी सरकार र नेकपासंग जुध्न सक्ने संगठन निर्माण गर्न मेरो ध्यान हुनेछ ।’
जहाँसम्म तरुण दलले केही गरेको छैन भनिदैछ, त्यो सम्पूर्णरुपमा गलत हो । सातवटै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लामा वर्तमान सरकारका खराब कामबारे जनतालाई सुुसूचित गर्ने काम गरिएको छ । भ्रष्टाचार, महङ्गी र गुण्डागर्दीको विरोध गर्दा सयौं कार्यकर्ता घाइते भएका छन् । महासचिव शाहीले भने जस्तो भ्रष्टाचारको विरोध गर्न डराएको होइन । भ्रष्टाचारको विरुद्धमा थुप्रै कार्यक्रम गरिएका छन्, अझै पनि गरिन्छ ।
कांग्रेस नेतृत्वले तरुण दलसहित नेबिसंघ, महिला संघ लगायतका भ्रातृ संगठनलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन सक्नुपर्छ । भागवण्डा भन्दा पनि लगनशीलता, क्षमता र समर्पणको मूल्याङ्कन गरेर जिम्मेवारी दिनुपर्छ । यो कुरा भ्रातृसंठनमा मात्र होइन, पार्टीमा पनि लागू गर्नुपर्छ ।
‘पार्टीको १४औं महाधिवेशन पनि आइरहेकाले अब असल र सक्षम नेतृत्व चयन गर्ने समय पनि आउँदैछ । स्पष्ट दृष्टिकोण र नीति योजनाकासाथ प्रस्तुत हुने नेतालाई नै पार्टीको नेतृत्व सुम्पिनुपर्छ ।’ चापागाईं बताउँछन् ।
नेपाली सेनाका पुर्व जर्नेलको प्रश्न– नेपाल वावुराम भट्टराईलाई कुनै यमीले दिएको दाईजो हो ? [भिडियो अन्तरवार्ता]
राजश्व छलिका पुराना फाईल खोल्दैछौं, कसैलाई छोडिन्नः महानिर्देशक मैनाली [भिडियो अन्तरवार्ता]
दशैंमा खानपिन र जिवन शैली कस्तो हुनुपर्छ ? यस्ता छन् चिकित्सकका सुझाव (भिडियोसहित)